တဘက်‌သား အ‌ပေါ်ယုတ်‌မာထားတဲ့သူ‌တွေ ‌ဒီဖြစ်ရပ်လေးကို သိစေချတင်လိုက်တာ...
တခါတုန်းက ကိုယ် ငွေလိမ်ခံရဖူးတယ်။
လိမ်တဲ့လူက သူငယ်ချင်း။ ငွေလိုလို့ အိမ်ဂရံ တလလောက် ပေါင်ချင်တယ် တဲ့။ ကိုယ်က အဲ့ချိန်တုန်းက စုထားတာလေးတွေရှိတာဆိုတော့ လိုတာလေးတွေ တခြားလူဆီကနေ တဆင့်ပြန်ချေးပြီး ကူညီ ခဲ့တယ်။ အတိုးပေးမယ် ဆိုတာတောင် မယူပါဘူး ပြောခဲ့တယ်။ တလထဲဆိုတော့ သုံးပါပေါ့။ ဒါက အဖေ့ ကျန်းမာရေး အမေ့ ကျန်းမာရေးအတွက် စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံ လေးတွေမို့ ….တလနေရင် ပြန်ပေးပါလို့လည်း ဆက်ဆက်မှာခဲ့ပေမယ့် တကယ် တမ်းကျ ပြန်မပေးနိုင်ဘူး။ သူထွက်ပြေးသွားတယ်။
ပိုဆိုးတာက …အဲ့ဒီ ဂရံ က သူပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ကို ပေါင်ခိုင်းထားတဲ့ လူရဲ့ ဂရံ။ အဲ့လိုမျိုး လူပေါင်းများစွာဆီကနေ လိမ်ပြီးပြေးသွားတယ်။ ထောင်ဂဏန်း ပါသွားတာပေါ့။
ကိုယ်က တဖက်ကို မျက်နှာမပျက်ချင်တော့ အတိုးတွေ စပေးရတယ်။
လိမ်ခံရတဲ့ လူတွေ နဲ့ စာရွက်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ကိုယ့်လို ငွေပေးထားတဲ့သူတွေ တရားတဘောင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ်က ဒါတွေ နားမလည်ဘူး။ သူများက ဒါကောင်းတယ် ဒီလိုလုပ်ဆို လုပ်တာပေါ့။
ရှေ့နေဌား ဘာညာ နဲ့ ငွေကုန်တာ သောက်သောက်လဲ။ အဲ့ချိန်မှာ အဖေ့ ကျန်းမာရေးစမကောင်းဖြစ်တယ်။ အသည်းကင်ဆာ တဲ့။
အဖေ့ကို ဆေးကုဖို့အတွက် ကိုယ့်မှာ ငွေမရှိတော့ဘူး။ အဲ့တော့ ထပ်ချေးရတယ်။ မလောက်တော့ အိမ်ရောင်းပစ်လိုက်ပြီးကုတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖေ မသက်သာလာဘူး။ အဲ့ဒီချိန်မှာ ရုံးချိန်းတွေကလည်း စိပ်နေပြီ။ အဖေက ဆေးရုံမှာ …။ ဒုတိယအကြိမ် ဆေးရုံတက်ပြီး ပြန်ဆင်း၊ မကြာဘူး ဆေးရုံပြန်တက်ရတဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ အဖေ့လက်ဖျံလေးတွေ က ကလေးလက်သာသာလောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။
ကိုယ့်မှာ အဖေ့ဘေးနားနေရင်း ဖုန်းတလုံးနဲ့ ငွေလိုက်လှည့်၊ ပြသနာတွေရှင်း ….
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဖေ့ကို လက်လွှတ်ရတော့မယ် ။ အဲ့ဒီအချိန် ကူကယ်ရာမဲ့တဲ့ ခံစားချက်မျိုး နောက်ထပ်ရှိမယ်တောင် မထင်လောက်အောင်ပဲ။ ဒီမှာပဲ ကိုယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး အမှုကိုပိတ်ပြီး စာရွက်ပိုင်ရှင်ကို စာရွက်တွေ ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ အဖေ့နားမှာပဲ အဖေဆုံးတဲ့အထိ နေပြီး ဝေယျာဝစ္စ လုပ်ပေးရင်း ပြုစုပေးခဲ့တယ်။
ငါးနှစ်ကျော်ပြီ။ အခုလည်း ကိုယ် အဆင်မပြေသေးဘူး။ဒါပေမယ့် ရပ်တည်နေတုန်းပဲ။
အခုမနက် ငွေလိမ်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းကို တွေ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုတွေ့တော့ ပျက်ယွင်းသွားတဲ့ သူ့မျက်နှာကို မြင်လိုက်တဲ့ ခဏမှာ သူ့အပေါ် ဘာမှ ခံစားချက်မဖြစ်ဘူး။ ဒီငါးနှစ်လုံးလုံး ကိုယ့်မှာ ရုန်းကန်ရင်း ရပ်တည်နေပေမယ့် သူ ဘယ်လို ပုန်းကွယ်ပြီး နေ နေရလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သူ့ကို ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ သူ ဝမ်းနည်းပြီး ကိုယ့်ကို ဖက်ပြီး ငိုလိုက်တာ။ ငိုရင်းနဲ့ တောင်းပန်တာလည်း ဗလုံးဗထွေး။
အဆင်ပြေရဲ့ လား မေးတော့ ထမင်းမစားရသေးတာ နှစ်ရက်ရှိပြီတဲ့။ ဒါနဲ့ မနက်စောစော လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ကျွေးပြီး ငွေတချို့ လက်ထဲထည့်ပေးခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်သလို ဝဋ်ကလည်း သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတယ်။
သံသရာ ဆိုတာ သိပ်ကြောက်စရာ ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။
ကိုယ်လည်း ကိုယ်ပေးစရာရှိတာတွေ ပေးနိုင်ဖို့ ပို အလုပ်လုပ်ရဦးမယ်။
တခါတုနျးက ကိုယျ ငှလေိမျခံရဖူးတယျ။
လိမျတဲ့လူက သူငယျခငျြး။ ငှလေိုလို့ အိမျဂရံ တလလောကျ ပေါငျခငျြတယျ တဲ့။ ကိုယျက အဲ့ခြိနျတုနျးက စုထားတာလေးတှရှေိတာဆိုတော့ လိုတာလေးတှေ တခွားလူဆီကနေ တဆငျ့ပွနျခြေးပွီး ကူညီ ခဲ့တယျ။ အတိုးပေးမယျ ဆိုတာတောငျ မယူပါဘူး ပွောခဲ့တယျ။ တလထဲဆိုတော့ သုံးပါပေါ့။ ဒါက အဖေ့ ကနျြးမာရေး အမေ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ စုထားတဲ့ ပိုကျဆံ လေးတှမေို့ ….တလနရေငျ ပွနျပေးပါလို့လညျး ဆကျဆကျမှာခဲ့ပမေယျ့ တကယျ တမျးကြ ပွနျမပေးနိုငျဘူး။ သူထှကျပွေးသှားတယျ။
ပိုဆိုးတာက …အဲ့ဒီ ဂရံ က သူပိုငျတာမဟုတျဘူး။ သူ့ကို ပေါငျခိုငျးထားတဲ့ လူရဲ့ ဂရံ။ အဲ့လိုမြိုး လူပေါငျးမြားစှာဆီကနေ လိမျပွီးပွေးသှားတယျ။ ထောငျဂဏနျး ပါသှားတာပေါ့။
ကိုယျက တဖကျကို မကျြနှာမပကျြခငျြတော့ အတိုးတှေ စပေးရတယျ။
လိမျခံရတဲ့ လူတှေ နဲ့ စာရှကျပိုငျရှငျတှနေဲ့ ကိုယျ့လို ငှပေေးထားတဲ့သူတှေ တရားတဘောငျတှေ ဖွဈကွတယျ။ တကယျတမျးကတြော့ ကိုယျက ဒါတှေ နားမလညျဘူး။ သူမြားက ဒါကောငျးတယျ ဒီလိုလုပျဆို လုပျတာပေါ့။
ရှနေ့ဌေား ဘာညာ နဲ့ ငှကေုနျတာ သောကျသောကျလဲ။ အဲ့ခြိနျမှာ အဖေ့ ကနျြးမာရေးစမကောငျးဖွဈတယျ။ အသညျးကငျဆာ တဲ့။
အဖကေို့ ဆေးကုဖို့အတှကျ ကိုယျ့မှာ ငှမေရှိတော့ဘူး။ အဲ့တော့ ထပျခြေးရတယျ။ မလောကျတော့ အိမျရောငျးပဈလိုကျပွီးကုတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဖေ မသကျသာလာဘူး။ အဲ့ဒီခြိနျမှာ ရုံးခြိနျးတှကေလညျး စိပျနပွေီ။ အဖကေ ဆေးရုံမှာ …။ ဒုတိယအကွိမျ ဆေးရုံတကျပွီး ပွနျဆငျး၊ မကွာဘူး ဆေးရုံပွနျတကျရတဲ့ နောကျဆုံးအခြိနျမှာ အဖလေ့ကျဖြံလေးတှေ က ကလေးလကျသာသာလောကျပဲ ရှိတော့တယျ။
ကိုယျ့မှာ အဖဘေ့ေးနားနရေငျး ဖုနျးတလုံးနဲ့ ငှလေိုကျလှညျ့၊ ပွသနာတှရှေငျး ….
တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အဖကေို့ လကျလှတျရတော့မယျ ။ အဲ့ဒီအခြိနျ ကူကယျရာမဲ့တဲ့ ခံစားခကျြမြိုး နောကျထပျရှိမယျတောငျ မထငျလောကျအောငျပဲ။ ဒီမှာပဲ ကိုယျ ဆုံးဖွတျလိုကျပွီး အမှုကိုပိတျပွီး စာရှကျပိုငျရှငျကို စာရှကျတှေ ပွနျပေးလိုကျတယျ။ အဖနေ့ားမှာပဲ အဖဆေုံးတဲ့အထိ နပွေီး ဝယြောဝစ်စ လုပျပေးရငျး ပွုစုပေးခဲ့တယျ။
ငါးနှဈကြျောပွီ။ အခုလညျး ကိုယျ အဆငျမပွသေေးဘူး။ဒါပမေယျ့ ရပျတညျနတေုနျးပဲ။
အခုမနကျ ငှလေိမျသှားတဲ့ သူငယျခငျြးကို တှတေ့ယျ။ ကိုယျ့ကိုတှတေ့ော့ ပကျြယှငျးသှားတဲ့ သူ့မကျြနှာကို မွငျလိုကျတဲ့ ခဏမှာ သူ့အပျေါ ဘာမှ ခံစားခကျြမဖွဈဘူး။ ဒီငါးနှဈလုံးလုံး ကိုယျ့မှာ ရုနျးကနျရငျး ရပျတညျနပေမေယျ့ သူ ဘယျလို ပုနျးကှယျပွီး နေ နရေလဲ ဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ သူ့ကို ပွုံးပွနှုတျဆကျခဲ့တယျ။ သူ ဝမျးနညျးပွီး ကိုယျ့ကို ဖကျပွီး ငိုလိုကျတာ။ ငိုရငျးနဲ့ တောငျးပနျတာလညျး ဗလုံးဗထှေး။
အဆငျပွရေဲ့ လား မေးတော့ ထမငျးမစားရသေးတာ နှဈရကျရှိပွီတဲ့။ ဒါနဲ့ မနကျစောစော လဘကျရညျဆိုငျမှာ ကြှေးပွီး ငှတေခြို့ လကျထဲထညျ့ပေးခဲ့တယျ။
ကြှနျတျောတို့က ကိုယျ့အလုပျ ကိုယျလုပျသလို ဝဋျကလညျး သူ့အလုပျသူလုပျနတေယျ။
သံသရာ ဆိုတာ သိပျကွောကျစရာ ကောငျးလှနျးလှပါတယျ။
ကိုယျလညျး ကိုယျပေးစရာရှိတာတှေ ပေးနိုငျဖို့ ပို အလုပျလုပျရဦးမယျ။